काठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंलगत्तै मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न लागेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले पार्टीको निर्देशन वा शीर्ष तहमा छलफल गरेर सहमतिमा मन्त्री थप्न लागेको नभई केहि पूर्वमाओवादी नेतालाई उपहारस्वरुप मन्त्री बनाउन लागेका हुन् ।
Previous ओरालो लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइलाग्यो फेरि अर्को ठूलो आपत ! देशकै यी चर्चित २३ जनाले एकसाथ निकाले यस्तो कडा विज्ञप्ती, बालुवाटारमा मच्चियो हलचल, अब के गर्लान ओली ?
Next रअ’ प्रकरणले नेकपा वि’वाद ‘फाइट टू फिनिस’तर्फ : ओलीको सन्देश प्रचण्डद्वारा अस्वीकार…हेर्नुहोस् ।